”Sidee Tanzania ku qaadatay Buurta Klimanjaro?!!” – Dood ka dhex bilaabatay Keyan-ka & Tanzania (Arag maabka Somalia oo ay isna qalloociyeen) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Sidee Tanzania ku qaadatay Buurta Klimanjaro?!!” – Dood ka dhex bilaabatay Keyan-ka...
”Sidee Tanzania ku qaadatay Buurta Klimanjaro?!!” – Dood ka dhex bilaabatay Keyan-ka & Tanzania (Arag maabka Somalia oo ay isna qalloociyeen)
(Hadalsame) 23 Okt 2021 – Maxkamadda ICJ ayaa inta badan dhul ay Kenya sheeganaysey u xugmisay dalka Somalia, taasoo fal-celin siyaasadeed iyo dood shacbawi ahba ka abuurtay labada dal ee Somalia iyo Kenya.
Kenya ayaa dhowr mar oo ay hadashay xukunka kaddib sheegtay inaysan marna aqbali doonin go’aankaasi oo ay ku tilmaantay mid ”dhan u janjeera oo aan caadil ahayn”, halka ay Somalia aqbashay tiiyoo 30% loo xukumay Kenya.
Yeelkeede, waxaa Kenya ka bilowday doodo kala geddisan oo ay qaarkood ku saabsan yihiin shacabka oo ku doodaya in ”nabad jacaylka looga faa’iidaystey” oo uu dal kasta oo deris ihi wax ka qaatay, waxaana haatan socota dood ku saabsan sida Buurta Klimanjaro oo ah tan ugu dheer Afrika ay ku qaadatay Tanzania.
Buurta Klimanjaro ayaa la sheegaa in 1886-kii, ay Queen Victoria, oo markaa xukumaysey UK, ay haddiyad dhalasho ahaan u siisay wiilka ay ayeeyada u ahayd ee Kaiser Wilhelm II oo xukumayey Jarmanka oo Tanganyika markaa haystey.
”Kenyan-ku waa inay u jeestaan dhanka Tanzania oo ay is waydiiyaan sida Klimanjaro ku martay dhankooda…. Qof baa si kas ah u qalloociyey xarriiqda xuduudda Kenya.” ayuu mid soo qoray.
Waxaana usoo jawaabey Tanzanian-ka oo ku dooday in jiitinta dhanka kaleba laga eegi karo, halka qaarkood ay ku doodeen in xitaa la toosiyo xadka Somalia iyo Kenya.
Previous articleLaba wasaaradood oo Aljeeriyaan ah oo joojiyey inay af Faransiis adeegsadaan (Wasaarad ay mar kasta mamnuuc ka ahayd inay Faransiis isticmaasho)
Next articleTOOS u daawo: Chelsea vs Norwhich City – LIVE (Shaxda Sugan)